Promolux နဲ့ LED Lighting - စားနပ်ရိက္ခာအလင်း၏သိပ္ပံ
t8 Plug-n-Play စ
အနိမျ့ Profile ကို Stick
စိတ်တိုင်းကျ LED ဖြေရှင်းနည်း
linear LED မီးအာမခံ
MR16 & A19 မီးအိမ်အာမခံ
ချောကလက် & Candy
အသင့်စားဆိုင် & ပြင်ဆင်အစားအစာများ
စပျစ်ရည်, ဘီယာ & ရှန်ပိန်
ကနျြးမာရေး & ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Applications ကို
အခြား Applications ကို
ဂရပ်ဖစ်အနုပညာ & ပုံနှိပ်
စိတ်တိုင်းကျ LED ကိုဒီဇိုင်း
Promolux အရောင်မှနိဒါန်း Lighting တညျ့
Promolux Lighting ကဘာလဲ?
Customer များခံစားလတ်ဆတ်တဲ့အပေါ်အခြေခံပြီး Buy
ဖြစ်ရပ်မှန် Lighting နှင့်စားနပ်ရိက္ခာလုံခြုံမှုကိုဖော်ပြရန်
အရည်အသွေး Lighting တွေနဲ့ယှဉ်ပြိုင်မှုကနေကိုယ်ခွဲခြား
အတူ Merchandised ပင်လယ်စာ ပုံမှန်အစည်းအဝေး LEDs အတူ Merchandised ပင်လယ်စာ PROMOLUX LEDs သငျသညျအဆိုပါ Difference ကိုကြည့်ပါနိုငျ! အတူ Merchandised အသား ပုံမှန်အစည်းအဝေး LEDs အတူ Merchandised အသား PROMOLUX LEDs သငျသညျအဆိုပါ Difference ကိုကြည့်ပါနိုငျ!
Promolux အယ်လ်အီးဒီနောက်ဆုံးတော့ဘူး, ဒီထက်စွမ်းအင်ကိုသုံးပါနှင့်အရောင်အရေးပါအခါအမြဲအသုံးပြုသင့်ပါသည်။
While Promolux specializes in providing lighting solutions for fresh food displays in the grocery industry, retailers of heat sensitive and color critical products such as clothing stores, flower shops, and cosmetic departments have also started specifying Promolux lamps. Our lighting is also being requested for several new and exciting applications, such as medical နှင့် dental settings, museums, print shops, and other industry applications where true color is critical.
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်လုပ်သူအသားနှင့်အသင့်စားဆိုင်ဌာနများအတွက် Promolux အယ်လ်အီးဒီ installed ပါပြီ။ ဒါဟာတကယ်ကတခြားအယ်လ်အီးဒီဆေးကြောဟန်ကြောင့်သဘာဝအရောင်များထွက်တတ်၏။ သူတို့ဟာအရာရာကိုအလွန်ကြီးစွာသောကိုကြည့်ပါစေ။ "
ရောဘတ် Lamonica, Store ကိုပိုင်ရှင်, IGA Haberfield NSW
အေဂျေလင်း, လုံးအစားအစာများ, မြေတပြင်လုံးအစားအစာများ
"ကျနော်တို့အခုအမဲသားကိုဌာန Promolux သုံးပါနှင့်တစ်ဦးသံသယမရှိဘဲ, အရောင်အများကြီး သာ. ကောင်း၏။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ထုတ်ကုန်ကိုပိုမိုနှစ်သက်ဖွယ်စေသည် - အလွန်ဇီဇာဖြစ်နိုင်သူ။ အဆိုပါအရောင်များဒါတောက်ပပါ၏ Promolux ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ဆက်မှုရန်နောက်ထပ်ဘဝကထပ်ပြောသည်! "
ဒဲနစ် Sealy, မြေတပြင်လုံးအစားအစာများ Rochester တောင်တန်းများ, MI
အဆိုပါလက်ငင်း Promolux အယ်လ်အီးဒီအကြှနျုပျ၏ဝန်ဆောင်မှုအသားအမှု၌ကို install လုပ်ခဲ့ကြ ", သငျသညျအကြှနျုပျ၏မကျြနှာကိုပိတ်အပြုံးသုတ်မနိုင်! ငါအသား display တွေကြည့်ရှုပုံကိုလှပတဲ့အပေါ် commented ကြပါပြီမည်မျှဖောက်သည်သင်မပြောနိုင်ပါ။ ငါ Promolux အယ်လ်အီးဒီနှင့်အတူ 110% ကျေနပ်မှုဖြစ်ကြောင်းကို! "
Glen Bessey, Bessey ရဲ့အသားစျေး